Samsung mechiri nkeji nke mbụ nke 2019 na nsonaazụ na-adịghị mma | Gam akporosis
Samsung na-amalite afọ ahụ na nnukwu ndapụta na uru
Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke afọ na-abụkarị ihe kacha njọ maka ọtụtụ ụdị na gam akporo. Ahịa ha dị ala ma nsonaazụ ya n'ozuzu abụghị nke kacha mma. Anyị ejirila ya hụ yaajọ ahịa Sony nwere. Mana ihe adịbeghị mma maka Samsung. Dị Korea amalitela afọ ahụ n'ụzọ kachasị njọ.
Ebe ọ bụ Samsung malitere 2019 na nsonaazụ mbụ nke mbụ. Ruo izu a dọrọ aka ná ntị na nsonaazụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ ihe na-adịghị mma. N'okwu a, ọrịre ahịa na-adịghị mma site na nkewa semiconductor enyerela aka na ọdịda a. Yabụ uru ụlọ ọrụ ahụ dara 60%.
N'afọ gara aga, ọtụtụ ndị semiconductors mere dị ka ihe ntanye maka ụlọ ọrụ Korea. Ọ bụ ezie na nke a oge, kwuru matraasi bụ agaghịkwa, n'ihi na ha nwekwara ihe ọjọọ utịp a nke. Yabụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Galaxy S10 na-enwe ọchịchọ siri ike n'ahịa, ngalaba ekwentị Samsung na-ada.
Samsung ga-arụ ọrụ ya igwe ojii egwu egwuregwu ọrụ
Dị ka a mụtara, smartphone na IT nkewa amalite afọ na 40% dobe na uru gị, jiri ya tụnyere otu oge ahụ n'afọ gara aga. Agbanyeghi na mbelata ahịa na nkewa a pere ezigbo mpe, dịka amarala ya na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ahụ ekerịtala. Nsogbu a bụ mbelata oke oke uru nke ụlọ ọrụ Korea chere.
N'oge a, data ahịa maka nkeji iri na ise nke afọ 2019 na-egosi na Samsung enwetala ahịa ruru puku ijeri 27,2 Korea. Nke a bụ ntakịrị ntakịrị si afọ gara aga, sonso 5%. Nke a n'onwe ya abụghị ihe na-enye nsogbu, ebe ọ bụ na ọ bụghị nnukwu ọdịda. Ọ bụ oke uru ahụ ekwuru na mbụ adaala nke ukwuu.
Ebe ọ bụ na ahịa na nkewa a nke smartphones na-ada, ma ọ bụghị nke ukwuu, naanị 5%. Mana uru dị n'akụkụ nke ụlọ ọrụ a adabala nke ukwuu. Ha dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% na 1,5 enweta mmeri.. Nke a bụ eziokwu na-eweta nchegbu na ụlọ ọrụ, n'ezie. Agbanyeghị na Galaxy S10 dị ugbu a nwere ezigbo nnabata na ahịa na ụlọ ọrụ nwere nnukwu olileanya maka ha.
N'eziokwu, ezigbo ihe Samsung Galaxy S10 ndị a nwere ọ bụ ozi ọma maka ụlọ ọrụ, na akụkụ. Ebe ọ bụ na ọ na-enyere ha aka ịghaghachi ala, ma e jiri ya tụnyere nkeji gara aga. Agbanyeghị na iburu n’uche na ahịa ekwentị n’ozuzu ha na-ada, nan 2018 ha dara n’ahia n’izugbe. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ ga-eburu n'uche na ọ kpatara ụfọdụ nnukwu ụgwọ.
N'ime ọnwa ndị mbụ nke 2019, Samsung hapuru anyi uzo ohuru ohuru. N'otu aka, ihe Galaxy J nso igwe, iji mee ka ụzọ dị iche iche nke Galaxy A. E nweela ezinụlọ ọhụrụ nke ekwentị, nke bụ nke lma ọ bụ Galaxy M nke a na-eme ugbu a maka ahịa India dị ka isi ebumnuche. Yabụ, ịhazigharị usoro ha bụ ihe mefuru ego.
Ọ bụghị naanị ịhazigharị usoro ndị ahụ n'onwe ya, kamakwa mmepụta nke ekwentị ọhụrụ. Ọzọkwa agbakwunyere mmefu nke ndozi ndị a na ụdị, ọhụrụ aghụghọ na mgbasa ozi ahịa na ụlọ ọrụ emeela iji kwalite ụdị ndị a. Ha niile bụ ụgwọ ụlọ ọrụ ga-eweta na nkeji nke mbụ a. Ọ bụ ezie na a ga-atụ anya na ha ga-ebelata oge.
Samsung Galaxy A80: Igwe dị n’etiti ya na igwefoto na-agbagharị
Bụlagodi, Samsung chere na nkeji nke abụọ nke afọ a ga-aka mma. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya na mmụba na ọchịchọ na nkeji nke abụọ nke afọ. E nwere ọtụtụ ụdị ha chere nwere ike ịkwalite ahịa ha, dịka Galaxy S10 5G ma ọ bụ Galaxy A80, ụdị ọhụụ na nke na-enye ihe ọhụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung na-amalite afọ ahụ na nnukwu ndapụta na uru
Smite Blitz-ewe gị n'ihu akara nke akụkọ ifo chi na a kenkwucha RPG
Redmi nwere Snapdragon 855 nwere ike ịpụta na-enweghị ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ihuenyo